🥇 ▷ Microsoft waxay ku dhawaaqday HoloLens 2, horumar badan, laakiin wali aad qaali u ah ✅
Microsoft waxay ku dhawaaqday HoloLens 2, horumar badan, laakiin wali aad qaali u ah
HoloLens waa madaxa Microsoft isku-dhafka ah ee loo yaqaan ‘Mixed Reality (MR)’, shalayna waxay heshay badalkiisa. HoloLens 2 waxay keenaysaa dhowr astaamo cusub, oo ay kujirto isbeddelo naqshadeyn ah, laakiin waxay wali sii wadaa bartilmaameedkeeda suuqa – xirfadlayaasha warshadaha, ee ma aha macaamiisha caadiga ah.
HoloLens 2 wuxuu soo muuqday ku dhawaad ​​seddex sano ka hor. Waxay leedahay muuqaal ballaaran oo aragti ah – in kabadan laba jibaar, sida laga soo xigtay Microsoft, laakiin wali waxaad helaysaa 47 pixels halkii aragtidiba. Waxay leedahay dareeme qoto-dheer oo ToF ah oo dabagala dhaqdhaqaaqa gacmahaaga. Tan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo algorithms. Microsoft waxay leedahay ka guurista HoloLens una dhaqaaqda HoloLens 2 waxay la mid tahay inaad uga bedesho 720p ilaa 2K il walba.
HoloLens 2 waxay leeyihiin kaamirooyin yar-yar oo sawirada sawir-qaaddada u adeegsanaya xaqiijinta Windows Hello Waxay sidoo kale hagaajiyaan sawirka iyadoo loo eegayo masaafada u dhexeysa indhahaaga. Qalabka wuxuu ku shaqeynayaa mashiinka kumbuyuutarka ee loo yaqaan ‘Snapdragon 850’ si loo kordhiyo nolosha batariga.
https://www.youtube.com/watch?v=eqFqtAJMtYE%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D%%26 3D1% 26playsinline% 3D0% 26idaajiide% 3D2% 26theme% 3Ddark% 26color% 3Dredred% 26lagaarayo% 3D2% 26
Qalabka madaxa wuxuu sidoo kale noqday mid raaxo badan. Waxyaabihii ugu waaweynaa dib ayaa loogula soo noqday isu dheellitir fiican, waxaana jira darajo si loo hagaajiyo cufnaanta. Waxa kale oo ay si fiican ugu shaqeysaa muraayadaha, aragtida ayaa la soo sara kicin karaa, marka uma baahnid inaad iska soo qaaddo oo aad qof la hadasho ama aad fasax gaaban qaadatid.
Microsoft waxay ku iibineysaa HoloLens $ 3,500, suuqgeyskiisuna waa xirfadlayaal aan miiska u fadhiyin inay adeegsadaan PC-yada, sida injineerada madaniga ah iyo dhakhaatiirta. Shirkaduhu waxay awood u yeelan doonaan inay asturiyaan HoloLens 2 kahor iibsashada. Microsoft ayaa soo saartay nooc loogu talagalay Trimble, oo ah shirkad ka shaqeysa dhowr meelood oo ay ka mid tahay dhismaha. Noocaan ‘HoloLens 2’ waxaa lagu dhex galiyay koofiyadda isticmaalka bannaanka.
Laabashada Microsoft ee Andromeda ayaa laga yaabaa inay bilaabato sanadka 2019 AKHRI WAX DHEERAAD AH: Fure Andromeda oo ka socda Microsoft ayaa laga yaabaa inuu muuqdo sannadka 2019
Madaxa MR wuxuu sii socon doonaa iibka sanadka dambe waxaana laga heli karaa Waqooyiga Ameerika, Japan, Shiinaha, Jarmalka, France, Ireland, Australia iyo New Zealand.